NOLOSHA SHIIDAN: MIYUU KU HABBOON YAHAY DHIRTA XILLIGA JIILAALKA, SIDA LOO ILAALIYO KUURIYADA WAQTI DHEER IYO SIDA LOO XAQIIJIYO HELITAANKA ABUURKA MUDDO DHEER? - WIXII MARTIDA
Khudaarta cagaaran ee sannadka oo dhan: waxaanu siinaa kaydinta muddada dheer ee karootada iyo diyaarinta jiilaalka si sax ah
Wixii bannaanka u badan, karootiga kaydinta waa dhibaato. Ma aha mid aad u adag in la koro dalagga, laakiin qof kasta ma badbaadin karaa inta buuxda xilliga qaboobaha.
Gaar ahaan su'aalo badan oo ku saabsan nabadgelyada khudaarta ayaa soo baxaya beeralayda cusub. Xilliga cimilada, waxaa si dhakhso ah u noqonaya laabatada, caaryada, iyo haddii aadan qaadin tallaabooyin deg deg ah, beergooyska ayaa dhici karta maalmo yar.
Sidee loo badbaadiyaa dabacasaha ka dib markii laga saaray dhulka? Maqaalkani wuxuu sharraxayaa dhowr hab oo lagu taliyey growers khibrad leh, taas oo aad ka dooran karto ikhtiyaarka ku haboon ee naftaada.
Waa maxay noocyo noocan oo kale ah oo awoodi kara in ay sii wadaan waqti cusub muddo dheer?
Kaydinta muddada dheer ee khudraddan, noocyo goor dambe-Bisaylkiisa ayaa ugu haboon.
Ka mid ah qaybaha dhexe, waxaa sidoo kale jira noocyo karooto si loo kaydiyo muddo dheer, laakiin qaar badan oo ka mid ah, sida caadiga ah, ma laha lahaanshaha tayada.
Qaybaha Baaskiilka ee soo socda ayaa waxaa ka mid ah kuwa ku qumman 115-135 maalmood. ka dib muuqaalka geedo. Noocyadaas waa qabow-u adkaysta, maaha mid u nugul cudurka, sidaa daraadeed waxay u baahan yihiin badbaado fiican.
Under shuruudaha wanaagsan, dabacasaha dabayaaqadii-Bisaylkiisa sii jirayaa ilaa July, iyo waqti isku mid ah ma lumiyaan dhadhan. Caadi ahaan, noocyada kala duwan ee noocyada khudradda cagaaran. Noocyada sooyaalka soo socda waa kuwa ugu caansan iyo baahida:
Boqoradda xilliga dayrta
Qeyb ka mid ah qurxinta Altai, wax la yaab leh maaha mid la magacaabay.
Dalagyada beeraha oo koray ciidda bacrin ah, sida caadiga ah, waxay ka sarraysaa astaamaha dhaqameed, tan iyo dhalidda ay ku dhowdahay 9 kg / m2, miisaanka - 240 g, iyo dhererka - 25 cm.
Wakiilka ka soo jeeda Polish polishers, si fiican loo ilaaliyo ilaa June. Marka ciidda uu ku dhaco dirxiga duurjoogta ah, kala duwanaanta noocani waxay noqon doontaa doorasho wanaagsan oo loogu talagalay beeritaanka xiga. Miraha waa celcelis ahaan, miisaanka - min 140 g.
Waxay soo jiidataa dareenka beertiisa ah ee dhalidda (laga bilaabo 8.5 kg / m2), wuxuu leeyahay xididada dheer illaa 27 cm oo miisaankeedu yahay 200 garaam.
Noocyada xilliga-dhexe ee kaydka muddada dheer waxaa ka mid ah:
Nooca sareeya waxay sii wadi karaan tayadooda ilaa 10 bilood.
Inkasta oo celceliska bislaanshaha, midhaha uu leeyahay dhadhan macaan, waxaa si fiican u haystay 8-10 bilood.
Ku dheji muddo dheer
Ka dib markii ay ka saareen xididada dhulka, dushooda waxaa laga saaray mindi fiiqan, tegaayo sida ugu macquulsan xididada - 1-2 mm.
Markaas waxaa la qalajiyey hal ama laba maalmood ka yar hoolka, iyada oo aan laga saaro haraadiga dhulka ka soo, iyo wax ka badan sidaa daraadeed ma aha mid ku habboon xididdada.
Waa muhiim! Ka hor inta aanad khudradda ku ridin god, qarsoodi ama qolka hoose, jeermiska oo leh daawo of copper sulfate ayaa loo baahan yahay.
In badan oo Maqsin ama god
Habkani waa mid da 'yar oo fudud, laakiin luminta dhaliddu waa mid la taaban karo.
Maqsinka ama ceelku waxay u baahan yihiin inay ku faafaan burka, xayawaanka ama kuraasta qalalan.
Ka dibna ku dhaji karootada meeshan.
Marka dalbashada dalagyada xididka ah ee buluugga ah, dhererka qoorta waa in la sameeyaa iyadoo lagu saleynayo sifooyinka qaybta dabiiciga ah iyo xaaladaha hawo-qaadista, iyo sidoo kale cabbirka qolka.
Muhiimadda weyni waa qoyaan, taas oo ah 90%, iyo heerka qiyaasta dalagyada xididka ah (ka soo ururinta waa inay dhaafaan wax ka badan laba maalmood). Iyo sidoo kale maqaasiinka leh habka kaydinta, waa pre-qaboojiyey + 1 ... + 4 digrii ugu yaraan hal maalin ka hor goosashada.
Dabadeed, heerkulkani waxa la hayaa illaa iyo dhammaadka kaydka.
Ka sokow waqti ka waqti waxaad u baahan tahay in aad xalliso oo ka saarto miro jabtay.. Qasabkani wuxuu noqon karaa 5-8 bilood.
In ciidda ama balka cusbada
Habka loo ilaaliyo miraha waa wax soo saar, laakiin sidoo kale waqti qaadashada.
Ka hor inta aanad khudaarta saarin waxay lagama maarmaan tahay in la diyaariyo sanduuqyada, mid waliba 4-6 baaldiyo dalagyada xididka ah.
Shub lakabka dhadday ama ciid 5 cm qaro weyn, ka dibna soo saaro dabacasaha, qalab isku mid ah bulk.
Sidaa daraadeed, nidaamkani waa la fuliyaa ilaa sanduuqa la buuxiyo.
Isla mar ahaantaana, sida berrinka waa in ay ahaato mid adag, sababtoo ah waxay ku jiraan saliidyo lagama maarmaan ah oo ka ilaaliya muuqaalka kalluunka iyo fungus.
Dusha sare ee weelka waa in si adag loo daboolaa daboolka alwaax.
Nolol maalmeedka ilaa 12 bilood.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan kaydinta dabacasaha ee ciidda, balka iyo qalabka kale:
Sanduuqa furan iyo dambiilaha
Habkan loo ilaaliyo dabacasaha waa mid xiiso leh sababtoo ah helitaankiisa iyo isla mar ahaantaana hab loo hubiyo.
Waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo xal dhoobo leh nafaqo oo la mid ah labeen dhanaan.
Kadibna ku dar walxo kasta oo la geliyo si aad u qalajiso.
Qaabkan, khudradda waa in ay qallalaan ugu yaraan laba cisho qaboojin, ilaa ay ku daboolaan qolof adag.
Marka dhoobada ay adag tahay, xididada waxaa la dhigaa sanduuqyo alwaax ama dambiilo.
Sidan oo kale karootada si wanaagsan loo ilaaliyo mudo 10-12 bilood ah.
Sidee loo badbaadiyaa karootada dadka deggan guryaha magaalada? Sanduuqyada leh dhadday, ciid ama diirka basasha ayaa ah habka kaydinta ugu haboon.
Khudaarta ayaa lagu dhejiyaa lakabyo, iyaga oo ku dhajiya alaab fara badan, dabool leh dabool leh oo laga saaro balakoonka kuleylka leh, loggia ama hareeraha.
Haddii balakoonka si liidata loo dahaariyo, ka dibna buste hore, joodariga ama wax kale oo ku habboon ayaa la geliyaa sanduuqyada leh khudaarta.
Iyadoo ku xiran heerkulka abuuray, karootada waxaa lagu kaydin karaa balakoonka 5 ilaa 8 bilood.
Ku buuxinta qaboojiyaha
Diyaarinta karootada waqti dheer qaboojiyaha, waxaad u baahan tahay:
Ku fur furka hoose si ay u engegto oo qaboojiso. Sidaa darteed, waxaa suurtogal ah in laga fogaado kondensate, taas oo keeni karta qudhammada dalagyada xididka.
Ka dibna khudaarta waa in lagu duubaa bacaha balaastigga ah, marka laga reebo in ka badan laba ama saddex nooc oo mid ah.
Baakadaha si adag u xirxiraan oo ku dheji khudaarta cagaaran.
Haysashada karootada cusub waa wax aan ka badnayn 2-3 bilood.
Isticmaalida habkan kaydinta, waxaad naftaada siin doontaa khudrad dhadhan fiican leh oo caafimaad leh dhowr bilood.
Ka dib markii lagu soo bandhigay kaydinta dabacasaha, waxaa muhiim ah in la ogaado shuruudaha ay kala duwan yihiin iyadoo ku xiran qaabka kaydka.
Sida aad u aragto, habka ugu badan ee loo isticmaalo in lagu ilaaliyo khudaarta waa kuwa ugu wax soo saar leh. Iyadoo kaydka dhadhanka ama ciidda, dalagyada xididada ku dhufto kaliya 4-6%, halka kaydka bulk - ilaa 30%.
Geedka abuurka xilliga qaboobaha
Marka aad soo iibsaneyso miraha karootada, waa in maskaxda lagu hayo muddada biqilka khudaarta waa 2-3 sano. Isla mar ahaan geedo soo muuqda on 10-12 maalmood ka dib abuurka abuuray. Oo weliba waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in muddo dheer nolosha shelf, hooseeyo biqilka abuurka sida. Si loo dedejiyo biqilka abuurka, waxaa lagu talinayaa in lagu qooyo dheecaanka nafaqada.
Ogow! Sida ay sheegeen bannaanka u khibrad leh, waxaa ugu badbaado in la isticmaalo miraha karooto ee goosashada hore.
Waxaa sidoo kale jira habka beeridda jiilaalka, marka dhamaadka November, grooves waxaa sii qoto dheer 5 centimitir, iyo kor ka soo ay "warware" by humus. Isla mar ahaantaana, tirada miraha waa in la kordhiyaa 20-30%. Khiyaamadani waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho khudradda asaasiga ah ee dabayaaqada bisha Juun. Goosashada karootada qaboobaha ee loogu talagalay kaydinta muddada-dheer lama doonayo.
Sida loo kordhiyo nolosha shelf ee Kuuriya?
Nidaamkan ilaalinta ma bixinayo kaydinta muddada dheer ee weel caag ah - ugu badnaan laba toddobaad. Intaa waxaa dheer, u dhow taariikhda dhicitaanka, cuntada ayaa lumisa qaar ka mid ah dhadhanka. Haddii karootiga inta badan loo isticmaalo sida salad, pizza, ama sandwiches, waa la qaboojin karaa kadibna loo qaadaa qaddarka loo baahan yahay.
Karootada waa badeeco khudradeed oo lagama maarmaanka u ah diyaarinta cunto maalinle ah., ka sokow, waa faa'iido leh. Sidaa darteed, si aad u isticmaasho sanadka oo dhan, waxaa muhiim ah in la badbaadiyo xididada. Waxaa jira habab badan oo dayactir lagu diyaarin karo; waxaad u baahan tahay inaad doorato ikhtiyaarka ugu haboon ee naftaada ku habboon xaaladaha nololeed.